·5months ago ·42 Comments
Like – 10K Share – 981
2021-08-19 at 10:01 AM
Chit Khon Cho says:
2021-08-19 at 10:03 AM
Aung Valin JU says:
Thi Tar says:
2021-08-19 at 10:09 AM
Chu Lu Ku says:
2021-08-19 at 10:21 AM
Su Mar says:
2021-08-19 at 10:23 AM
2021-08-19 at 10:24 AM
Good. Waiting for
2021-08-19 at 10:26 AM
2021-08-19 at 10:27 AM
Sw6ကို ရွှေ့ပြီးလွင့်နေ့ကြရင် 17.71ရွှေပြီးဖမ်းလိုရတယ်
Mg Phyo says:
2021-08-19 at 10:30 AM
Than Htike Zaw says:
2021-08-19 at 10:45 AM
၈နာရီပြီးတော့ နောက်ထပ်တကြိမ်ပြန်လွင့်ဖို့အစီအစဥ်ရှိရင်ကောင်မယ် ရှစ်နာရီက bbc burmese radio အစီအစဥ်နှင့်တိုက်နေလိုပါခင်ဗျာ
Win Lwin Oo says:
2021-08-19 at 10:52 AM
2021-08-19 at 11:30 AM
​ရေဒီယိုလဲ ဝယ်ထားပါပီ နား​ထောသ်ဖို့ ready ပါ
2021-08-19 at 11:40 AM
2021-08-19 at 12:10 PM
Oo Lay Naing says:
2021-08-19 at 1:49 PM
ပန်းရံပညာနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ says:
2021-08-19 at 1:55 PM
စေန မေလး says:
2021-08-19 at 2:29 PM
2021-08-19 at 2:30 PM
2021-08-19 at 2:37 PM
Apk .Fm နဲ့ ပြန်ထုတ်လွင့်နိုင်ရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်.
Aung Zay Nyein Chan says:
2021-08-19 at 2:42 PM
Khinhtar Yee says:
2021-08-19 at 5:47 PM
ခ်စ္နင္ေဝ မန္တေလ says:
2021-08-19 at 7:13 PM
Nyo Nyo Aungtin says:
2021-08-19 at 8:56 PM
2021-08-19 at 9:37 PM
NwayOo YanNg says:
2021-08-20 at 8:23 AM
အဆင်ပြေကြလားဗျ။ SW8 ကနေ 1 အထိ တခုပြီးတခုထားကြည့်တယ် 17.71 နားလောက်ဖမ်းနေတာ မရဖြစ်နေလို့
2021-08-20 at 12:54 PM
ဖုန်းနဲ့ သုံးလို့ ရမယ်
10Band Radio app ညွှန်ပြကြပါ။
စိုင်း နေ အောင် says:
မင္းေအာင္လိႈင္ဆိုတာ လီးပဲ ေခြးသား says:
ဖုန္းထဲက ပါတဲ RADIOလိုင္းေတြနဲ႔ နားေထာင္လို႔ရတယ္ မဟုတ္လား
Zarni Tun says:
2021-08-25 at 2:28 PM